Banyere Anyị - Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.
Ewepụghị Ihu Nkpuchi
Nkụnwụ Ahụ & akụkụ okuku ume
Guzobe na 2002, Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. anọwo na-arụpụta ọgwụ mgbochi ọrịa na ngwaahịa ndị nwere ike iku ume. Anyị na-amalite na-emepụtaIhe nkpuchi ihu na PPE site na February 2020 n'ihi ntiwapụ nke ọrịa ọrịa corona. Gbaara naOA, ISO13485 na FDA, anyị ụlọ ọrụ arụ ezigbo aha ọma n'etiti ndị ahịa anyị si mba 50 dị ka Germany, USA na Japan, wdg Hangzhou Shanyou brand “ ỌR. “A na-eto ebe niile site na iji ihe dị elu.
Ofbọchị E guzobere ya
Roomlọ Nzukọ Ọcha
Manufacturing & ikike
Hangzhou Shanyou Medical "ỌR” "ekpuchi ụlọ ebe 68,000 square mita mgbe ọcha ụlọ ogbako 15,000 square mita. Anyị azụtara ihe karịrị ahịhịa ọdịnala 200, yana ụzọ itolu nke ọgbara ọhụrụ na-emepụta ngwa ngwa ngwa ngwa. Ikike maka "ỌR” "ihe nkpuchi ihu bụ 10 nde PC / ụbọchị, nke ahụ bụ nde 300 kwa ọnwa. Anyị na-ebupụ UK, France, Spain, Germany, ọkachasị gụọ gọọmentị na nnukwu ọnụọgụ.
Ka ọ dị ugbu a, anyị azụọlarị ihe ntinye 200 na FFP2 / FFP3 / KN95 masks, ikike dị ihe dị 4 nde PC / ụbọchị. Anyị na-e kpọbata nnukwu mba dị iche iche, merie aha ọma na iwu na-aga n'ihu.
Hangzhou Shanyou Medical "ỌR" "na-ewere" Shanyou Spirit ", ya bụ," ndị ahịa gbadoro anya, teknụzụ na ogo bụ isi "iji jeere ọha mmadụ ozi.
Anyị QC ngalaba nwere otu gburugburu 45 ndị ​​mmadụ, n'oge Raw ihe nnyocha, Usoro Nnyocha, Emechara ngwaahịa Nnyocha. Ndị ọkachamara ọkachamara na-ekwusi ike na nrụgide dị elu.
Laboratorylọ nyocha ahụ na-ekpuchi 500m2, nke nwere ụlọ ọrụ nyocha zuru ezu maka Medical Masks na FFP2, FFP3 mask.
Hangzhou Shanyou Medical "ỌR” "na-ezute ihe ndị a chọrọ nke Quality Systems Standards ISO 13485, European Council Directive 93/42 / EEC, PPE REGULATION (EU) 2016/425 ma debanye aha ya na US FDA, Saudi Arabia FDA, na Australia TGA.
Anyị nwere akwụkwọ TUV Rheinland CE maka Nkpuchi ihu ịwa ahụ (ụdị IIR) na Nkpuchi ihu Ọgwụ (ụdị M, ụdị II) dị ka EN 14683-2019.
Ihe nkpuchi FFP2 / FFP3 anyị nwetara asambodo SGS CE na asambodo Universal CE dika EN149: 2001 + A1: 2009 wee nweta SGS Reach Report.
Hangzhou Shanyou Medical "ỌR” "na-agbaso iwu mba ụwa iji rụpụta ngwaahịa anyị, jide n'aka na ihe ọ bụla na-ezute ụkpụrụ ụfọdụ na ihe ndị ahịa chọrọ.